နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ၊ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသညျ့ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ (၉)ကွိမျမွောကျ နိုငျငံတကာလုံခွုံရေးဆိုငျရာညီလာခံသို့ တကျရောကျရနျ ရုရှားနိုငျငံသို့ထှကျခှာ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
ဇှနျ ၂၀၊ ၂၀၂၁ ဇှနျ ၂၀၊ ၂၀၂၁
နပွေညျတျော ဇှနျ – ၂၀
နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေး ကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ၊ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ရုရှား ဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီး Army General Sergei Kuzhugetovich Shoigu ၏ဖိတျကွားခကျြအရ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံတှငျ ကငျြးပပွုလုပျမညျ့ (၉)ကွိမျမွောကျနိုငျငံတကာလုံခွုံရေးဆိုငျရာညီလာခံ(Moscow Conference on Internati- onal Security-2021(MCIS-2021))သို့ တကျရောကျရနျအတှကျ ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ အပွညျပွညျဆိုငျရာမွနျမာလကွေောငျး(MAI)မှ အထူးလယောဉျဖွငျ့ နပွေညျတျော တပျမတျောလဆေိပျမှ ထှကျခှာသညျ။
နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေး ကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ၊ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဦးဆောငျသညျ့ ခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲအား ကောငျစီဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ၊ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဉီးစီးခြုပျ(ကွညျး)ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ကောငျစီဝငျမြား၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးမြား၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ နပွေညျတျောတိုငျးစဈဌာနခြုပျတိုငျးမှူး၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E.Mr. Nikolay A.Listopadovနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက လဆေိပျ၌ လိုကျလံပို့ဆောငျနှုတျဆကျကွသညျ။
နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ၊ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကောငျစီဝငျ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး မိုးမွငျ့ထှနျး၊ ကောငျစီတှဲဖကျအတှငျး ရေးမှူး ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ရဲဝငျးဦး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မိုးအောငျ၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ နပွေညျတျောကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ၊ မွို့တျောဝနျ ဒေါကျတာ မောငျမောငျနိုငျ၊ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှငျ့ နိုငျငံခွားစီးပှားဆကျသှယျရေးဝနျကွီးဌာန၊ ဒုတိယဝနျကွီး ဦးသနျးအောငျကြျော၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ရုရုားနိုငျငံစဈသံမှူး Colonel Sergei Kurchenko နှငျ့ မွနျမာ့တပျမတျောမှ ထူးခြှနျဆုရအရာရှိမြား၊ စဈဘကျ၊ နယျဘကျမှ တာဝနျရှိသူမြား လိုကျပါသှားကွကွောငျးနှငျ့ ခရီးစဉျအတှငျး (၉)ကွိမျမွောကျ နိုငျငံတကာလုံခွုံရေးဆိုငျရာညီလာခံ(MCIS-2021)သို့ ပါဝငျတကျရောကျခွငျး၊ စဈဘကျ၊ အရပျဘကျမှ တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခွငျး တို့အပွငျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံရှိ အထငျကရနရောမြား၊ တက်ကသိုလျမြားနှငျ့ စကျရုံ၊ အလုပျရုံမြားသို့ လလေ့ာသှားကွမညျဖွဈကွောငျးနှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မိုးအောငျ ဦးဆောငျသညျ့ တပျမတျော(ရေ) ကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့သညျလညျး စိနျ့ပီတာစဘကျမွို့တှငျ ကငျြးပပွုလုပျမညျ့ နိုငျငံတကာရကွေောငျးဆိုငျရာ ကာကှယျရေးပွပှဲ (International Maritime Defence Show IMDS) သို့ ပါဝငျတကျရောကျသှားမညျဖွဈသညျ။
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ (၉)ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာညီလာခံသို့ တက်ရောက်ရန် ရုရှားနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာ
နေပြည်တော် ဇွန် – ၂၀
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရုရှား ဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Army General Sergei Kuzhugetovich Shoigu ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် (၉)ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာညီလာခံ(Moscow Conference on Internati- onal Security-2021(MCIS-2021))သို့ တက်ရောက်ရန်အတွက် ယနေ့နံနက် ပိုင်းတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာလေကြောင်း(MAI)မှ အထူးလေယာဉ်ဖြင့် နေပြည်တော် တပ်မတော်လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာသည်။
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဦးဆောင်သည့် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား ကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဉီးစီးချုပ်(ကြည်း)ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ကောင်စီဝင်များ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Nikolay A.Listopadovနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်၌ လိုက်လံ ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်နှင့်အတူ ကောင်စီဝင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးမြင့်ထွန်း၊ ကောင်စီ တွဲဖက်အတွင်း ရေးမှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲဝင်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးအောင်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ မြို့တော်ဝန် ဒေါက်တာ မောင်မောင်နိုင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန်းအောင်ကျော်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရုားနိုင်ငံစစ်သံမှူး Colonel Sergei Kurchenko နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ထူးချွန်ဆုရအရာရှိများ၊ စစ်ဘက်၊ နယ်ဘက်မှ တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါသွားကြကြောင်းနှင့် ခရီးစဉ်အတွင်း (၉)ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာညီလာခံ(MCIS-2021)သို့ ပါဝင်တက် ရောက်ခြင်း၊ စစ်ဘက်၊ အရပ်ဘက်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း တို့ အပြင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံရှိ အထင်ကရနေရာများ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများသို့ လေ့လာသွားကြမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးအောင် ဦးဆောင်သည့် တပ်မတော်(ရေ) ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် လည်း စိန့်ပီတာစဘက်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် နိုင်ငံတကာရေကြောင်းဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေးပြပွဲ (International Maritime Defence Show IMDS) သို့ ပါဝင် တက်ရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဇှနျ ၁၁၊ ၂၀၁၈ Admin 0